မောင်းမကန် ကမ်းခြေတွင် နှစ်ကူး အပန်းဖြေ လာရောက်သူများဖြင့် စည်ကား၊ ညပိုင်းတွင် မီးပုံပွဲက? - Yangon Media Group
မောင်းမကန် ကမ်းခြေတွင် နှစ်ကူး အပန်းဖြေ လာရောက်သူများဖြင့် စည်ကား၊ ညပိုင်းတွင် မီးပုံပွဲက?
ထားဝယ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လောင်းလုံမြို့နယ် မောင်းမကန်ကမ်းခြေတွင် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်က နှစ်ကူးအကြိုလာရောက်သူများဖြင့် စည်ကားသည့်အပြင် ညပိုင်းတွင် တေးသီချင်းသီဆိုခြင်းများနှင့်အတူ မီးပုံပွဲဖြင့် နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြကြောင်းသိရသည်။ မောင်းမကန် ကမ်းခြေမှာ ထားဝယ်မြို့နှင့် ၁ဝ မိုင်ခန့်သာ ကွာဝေးရာ ပြည်တွင်းမှလာရောက်သည့်အပန်းဖြေခရီးသွားဧည့်သည် အများစုမှာ ထားဝယ်မြို့မှ အများဆုံးလာရောက်ကြပြီး နှစ်စဉ်စက် တင်ဘာလမှ မေလအထိ အပန်း ဖြေလာရောက်သူများရှိရာအခါ ကြီးရက်ကြီးများနှင့်စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နေ့များမှာ လာရောက်လည်ပတ်သူပိုမိုများပြားသည်။
”ဒီနှစ်ဆိုရင် အထက်မြန်မာ ပြည်ကနေ ကားနဲ့လာတဲ့သူပိုများ လာတာတွေ့ရတယ်။ ရန်ကုန်ဘက်ကတော့ ဘုရားဖူးကားကြီးတွေနဲ့ လာတဲ့သူပိုများပါတယ်။ ကားနဲ့လာတဲ့သူတွေက ထားဝယ်မှာ ညအိပ် ကြတာများတယ်။ ဒီမှာညအိပ်တည်းခိုတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူးရက်ဖြစ်တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်မှာ ညနေ ၃ နာရီလောက် ကစပြီး ရေဆင်းချိုးသူများလာတယ်။ ညပိုင်းမှာတော့ နှစ်ကူးချိန် ကို ကြိုရင်း ဝိုင်းဖွဲ့သီချင်းဆိုကြ၊ နှစ်ကူးချိန်ကျတော့ ပင်လယ်ကမ်း ခြေမှာ မီးပုံပွဲကျင်းပပြီးပျော်ကြသူ တွေရှိနေပါတယ်”ဟု မောင်းမကန် ကမ်းခြေတည်းခိုခန်းပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကပြောသည်။
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပိုမို ကောင်းမွန်လာသည့်အပြင် နယ် မြေအေးချမ်းမှုရှိလာသဖြင့် ထားဝယ်မြို့သို့ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ဘုရားဖူးခရီးစဉ်လာရောက်သူများ ပြားလာပြီး ယခင်ကမော်လမြိုင် မြို့နှင့် ထားဝယ်မြို့ ၂၁၇ မိုင်ခရီး တစ်နေကုန်ကားစီးသွားလာကြရ သော်လည်း ယခုအခါပုံမှန်မောင်းနှင်ပါက ငါးနာရီသာကြာတော့ကာ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် နှစ်ကုန်နေ့က မောင်းမကန် ကမ်း ခြေသို့လာရောက် အပန်းဖြေသူ ၅ဝဝဝ ဝန်းကျင်ရှိရာ ညပိုင်း၌ ကမ်း ခြေတွင် မီးပုံပွဲကျင်းပ၍ နှစ်သစ် ကိုကြိုဆိုသူငါးရာကျော်ရှိကြောင်း သိရသည်။
စိုက်ပျိုးရေး အခြေခံ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ကျပ်သိန်း ၅ဝဝဝ ထိ မြန်မာ့ လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေ
စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသရွေ့ ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း အကန့်အသတ??
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် လွယ်ဂျယ်ကားလမ်းပေါ်၌ တောင်ပြို သစ်ပင်လဲကျမှု ၂၁ နေရာရှိနေသည့်အတွက် ယာဉ်သွားယာဉ်လာ ပိတ်ဆို့လျက်ရှိ
ယီမင်စစ်ပွဲတွင် ဆော်ဒီကို အကူအညီပေးမှု ရပ်ဆိုင်းရန် ထရန့် ငြင်းပယ်
ကစားသမားသစ် အများအပြား ထပ်ခေါ်ရန်မရှိဟု ဂွါဒီယိုလာ အတည်ပြု